Umehluko phakathi kweNintendo Switch Lite neNintendo switchch | Izindaba zamagajethi
Umehluko phakathi kweNintendo Shintsha neNintendo Shintsha i-Lite
U-Eder Esteban | | Amakhonsoli, General
Kwethulwe iNintendo switchch Lite indlela esemthethweni kule ntambama. Kuyinto elula futhi encane ye-switch, enye yempumelelo enkulu emakethe ye-console yale minyaka edlule. Kwakucatshangwa ezinyangeni ezedlule ukuthi le nguqulo entsha izokwethulwa, njengoba kugcine kwenzekile. Le nguqulo entsha isishiya nezinguquko ezithile.
Hhayi kuphela ushintsho losayizi olungenye yezinto ezintsha iNintendo switchch Lite esishiya zona maqondana nemodeli yoqobo. Ngezansi kwakho sibala umehluko esiwutholayo phakathi kwalezi ziduduzi ezimbili. Ukuze wazi ukuthi yini elindelekile kulowo nalowo kubo.
1 Idizayini nosayizi
2 Ibhethri nokuxhuma
3 Izinhlobo zomdlalo
Ushintsho lokuqala esiluthola phakathi kwalokhu ngosayizi. INintendo switchch Lite ifika nesikrini esingu-5,5-intshi, incane kuneyasekuqaleni, engamasentimitha angu-6,2 ngosayizi. Yize ezimweni zombili sithola iphaneli ye-LCD enesinqumo esifanayo, amaphikseli we-1.280 × 720. Umehluko ngosayizi ucacile futhi ungabonakala ezithombeni.
Idizayini isiyonke ayikaze yenze ushintsho olukhulu, kuphela kuleli cala asinethuba lokuhlukanisa iJoy-Con, sengathi kwenzeke ekuqaleni. Ngakho-ke izinketho zikhawulelwe kancane futhi idizayini ihlala ingaguquguquki ngaso sonke isikhathi. Yize kwakwaziwa okwesikhashana ukuthi lokhu kuzokwenzeka.
UNintendo ubeke amazwana kwisethulo sakhe sokuthi impilo yebhethri iyagcinwa. Yize i-posteriori sekushiwo ukuthi empeleni sinokuzimela okukhulu kule console entsha. INintendo Shintsha i-Lite inikeza ukuzimela phakathi kwamahora amathathu kuya kwayisikhombisa, edlula leyo yokuqala (amahora ama-2,5 kuya kwayi-6). Yize kuncane, sinokuzimela okukhulu. Yize kungekho mininingwane ethile enikeziwe mayelana nebhethri elishiwoyo.
Ukuxhumeka okuyinhloko kuhlala ngaphandle kwezinguquko eziningi kakhulu, nge-Bluetooth, i-WiFi ne-NFC. Kulokhu kuphela lapho singatholi khona ikhebuli ye-HDMI, okungenani ebhokisini le-console, njengoba sekufundwe kamuva. Ngakolunye uhlangothi, njengoba kwaziwa, ikhonsoli ayisebenzi ethekwini kusuka ku-switch yasekuqaleni. Asisakwazi ukuyixhuma ethekwini ukuze idlale ku-TV.
Olunye ushintsho olukhulu esiluthola kukhonsoli izindlela zomdlalo. Njengoba bekwaziwa ngaphambili, iNintendo switchch Lite izosishiya sinemikhawulo ethile ngokwemisebenzi, yingakho ishibhile kakhulu. Kunemikhawulo ethile okubalulekile ukuthi uyibheke, ikakhulukazi uma kungabazeka ukuthi iyiphi oyothenga. Lezi yizici ezibaluleke kakhulu:
Ayikwazi ukusebenzisa imodi ye-TV kule khonsoli
Izilawuli zihlanganisiwe futhi azikwazi ukuhlukaniswa kokufanayo
Ayinakho okukhipha ividiyo, njengoba sishilo ngenhla
Akuhambisani ne-Nintendo Labo
Kukhona futhi ukungahambelani nedokhu yekhonsoli yoqobo
Ayikwazi ukusebenzisa imodi yedeskithophu ngaphandle kwe-Joy-Con yangaphandle
Njengoba ukwazi ukubona, iNintendo switchch Lite ikhawulelwe ngandlela thile ngokuya ngezinketho kuleli cala. Kepha ngokujwayelekile singajabulela ikhathalogi yomdlalo wekhonsoli ngaphandle kwezinkinga eziningi kakhulu. Njengoba bonke labo ingadlalwa ngemodi ephathwa ngesandla ziyahambisana nekhonsoli entsha. Uma iJoy-Con ithengwe ngokwahlukana, imidlalo ingatholwa futhi ngemodi yedeskithophu, yize kungahle kube nemikhawulo ethile.
Kuze kube manje Azikho izesekeli ezimenyezelwe i-Nintendo switchch Lite. Njengoba nje ikhonsoli yoqobo isivele inezinsiza eziningi ezitholakalayo, njengeSwitch Pro noma iPoké Ball Plus, esingayisebenzisa nenguqulo entsha, akukho lutho olumenyezelwe lolu hlobo olusha okwamanje. Okwamanje asazi noma kuyinto yesikhashana, nokuthi lapho ikhonsoli ingena emakethe ngoSepthemba kuzokwethulwa izesekeli zayo zokuqala, noma uma uNintendo ezibophezele ekungayivezeli noma yini yayo.
Omunye umehluko yintengo, yize lokhu bekuyinto ebivele ingaziwa ngaphambili. INintendo switchch yethulwe ngentengo yama-319 euros noma ama-dollar angama-299, kuya ngemakethe. Ngokuhamba kwesikhathi nangokunye ukukhushulwa, kujwayelekile ukuthi siyithengele okuthile okushibhile. Kepha lena intengo ejwayelekile yayo.
INintendo switchch Lite izokwethula e-United States ngenani lama-dollar ayi-199. Okwamanje intengo yayo ayikaqinisekiswa eYurophu, yize kulindeleke ukuthi ibe cishe ngama-euro angama-200 noma ngaphezulu nje kwama-euro angama-200. Kepha silinde ukuqinisekiswa okuthile okuvela eNiantic mayelana nalokhu. Ngakho-ke izofika ngentengo eyi-100 euros ephansi kunemakethe, okulondolozwa okuphawulekayo kwephakethe labasebenzisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Amakhonsoli » Umehluko phakathi kweNintendo Shintsha neNintendo Shintsha i-Lite
I-Acer Swift 7, ilaptop enhle emincane ngentengo engenanhlonipho [Buyekeza]
I-Oukitel C15 Pro, uhla lokungena ngenani lokungqongqoza